Bulchiinsi magaalaa Finfinnee misoomawwan bu'uuraa qonnaan bultoota daangaa magaalichaa jiraatan fayyadamoo taasisuu hojjechaa jiraachuu beeksise - ETHIOPIANS TODAY
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee misoomawwan bu’uuraa qonnaan bultoota daangaa magaalichaa jiraatan fayyadamoo taasisuu hojjechaa jiraachuu beeksise
Kutaa bulchiinsa Nifaas silk Laaftootti daandiin Qarsaa Kontomaa-Dheertuu Mojoo km 13 dheeratu ijaarsisuuf dhagaan bu’uuraa kaa’ame.
Daandii kanas kantiibaa itti aantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebeetu eegalchiisan.
Magaalaan Finfinnee guddattus qonnaan bultoota ishee hammattee guddachuu hin dandeenye turte,kanaanis qonnaan bultootni daangaa magaalichaa jiraatan maqaa misoomaatiin qe’ee isaaniirraa buqqaa’aa turani jedhan Aadde Adaanech.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee rakkoo qonnaan bultoota kanneenii furuuf kutaalee magaalaa gara garaa keessatti daandii bulchiinsa magaalaa Finfinneen wal qunnamsiisu km 36 birrii miliyoona100 fi miliyoona 51 caaluun hojjetamaa jiraachuun himameera.
Qonnaan bultootnis kana dura daandii dhabuun oomisha isaanii gabaatti dhiheeffachuuf rakkachaa akka turan dubbachuun daandiin kun ijaaramuun rakkoo isaanii akka furuuf dubbatan.
Rakkoo bishaan dhugaatii fi Hospitaalaa qonnaan bultootaa furuuf ni hojjetama jedhan Aadde Adaanech.
Harka wal qabannee jibbiinsa ofirraa fageessuun wal jaalala,wal Utubuu fi walii yaaduun waliin jiraannee guddina biyyaa itti fufsiifna jechuunis dhaamanii jiru.
Maqaa dhaabbataatin carraan isiin qaqqabeera jechuun hojiin waliin dhahuu hojjetamaa jiraachuu ibsame